I-BOEING 737 MAX yokuhlala: I-Boeing ivelisa inqwelomoya engakhuselekanga
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » I-BOEING 737 MAX yokuhlala: I-Boeing ivelisa inqwelomoya engakhuselekanga
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zase-Ethiopia eziQhekezayo • Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo • iindaba • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
IKomiti yeNdlu yase-US yezothutho icela amaBoeing 787 kunye nama-737 MAX ngemicimbi yemveliso
Ukulungiswa kwe-Boeing yamkela uxanduva olulodwa lwe-737 MAX yokuphahlazeka, iphumelele isivumelwano esithintela umonakalo wesohlwayo.
Amalungelo eflaya acinga ukuba oku akwanelanga kwaye athi angaqhubeka nokulwa.
I-Boeing yamkela uxanduva olulodwa lwe-737 MAX yokutshayisa, iphumelele isivumelwano esithintela umonakalo wokohlwaya.
Amagqwetha e-Boeing afake isicelo senkundla edibeneyo ngoLwesithathu kunye namagqwetha eentsapho zabantu be-157 abasweleke kwingozi ye-737 MAX e-Ethiopia, bamkela uxanduva lokuphela kwengozi ebulalayo kwaye babeka inkqubo yokusombulula phantse onke amabango.
Esi sivumelwano sokurhoxiswa kwetyala lembambano senza i IFlyersRights.org Isimangalo yenye yeendlela kuphela Ukuphendula kunye neNyaniso malunga nokungqubana kwe-MAX kunokufezekiswa, kunye noKhuseleko lwexesha elizayo ukunqanda ukufa okuphephekayo ngenxa yokuyekelela, ukungakwazi okanye ukurhwaphiliza kwezigqibo zokhuseleko.
Ezinye iindlela zizityhilelo zempempe, uphando lolwaphulo-mthetho kunye neenkqubo, uphando lweCongressional kusetyenziswa amagunya e-subpoena, kunye nezilungiso kuMthetho weNkululeko yoLwazi.
The I-FAA yaqhathwa ukuba qinisekisa inqwelomoya.
Isigqibo seNkundla ePhakamileyo ka-2019 eyaziwa ngokuba yiNkokheli ye-Argus sivumela iinkampani ezilawulwayo ezifana ne-Boeing kunye nee-arhente zokhuseleko zomdibaniso ezifana ne-FAA ukuba zigcine izigqibo zabo zokhuseleko ziyimfihlo kwaye zikhuselekile kuyo nayiphi na ingcaphephe yokhuseleko ezimeleyo okanye ukujongwa koluntu.
"Ummangalelwa, u-Boeing, uvumile ukuba uvelise inqwelomoya eyayinemeko engakhuselekanga eyayingunobangela wombuyekezo woMmangali owabangelwa yingozi ye-Ethiopian Airlines Flight 302," ingxelo ithi.
U-Boeing uvumile ngokucacileyo ukuba abaqhubi beenqwelomoya abanasiphoso.
Iphinde yakhulula ababoneleli ababini be-MAX: inkampani eyakha i-engile ye-jet ye-sensor yokuhlasela kunye naleyo yavelisa, kwinkcazo ye-Boeing, isofthiwe yokulawula inqwelomoya ephosakeleyo.
Esi siphakamiso siquka oko kubizwa ngokuba ngummiselo - isivumelwano esibophelelayo kwinkqubo yolungiso - esatyikitywa zizo zonke iintsapho ngaphandle ezimbini.
Lo mmiselo uthetha imbuyekezo yembuyekezo yebango lomntu ngamnye iya kugqityezelwa kulamlo okanye kwinkundla yaseIllinois, apho ikomkhulu iBoeing ikomkhulu. UBoeing uyavuma ukungazami ukunyanzela iintsapho zaphesheya, uninzi lwazo e-Afrika, ukuba zifune umonakalo kumazwe asekhaya, apho umonakalo unokuba sezantsi kakhulu.
Kwisiteyitimenti sangoLwesithathu, uBoeing uthe isivumelwano "sivumela amaqela ukuba agxile kwiinzame zawo ekumiseleni imbuyekezo efanelekileyo kusapho ngalunye."
UBoeing uzibophelele ekuqinisekiseni ukuba zonke iintsapho eziphulukene nabantu ababathandayo kwiingozi zihlawulelwe ngokupheleleyo nangokufanelekileyo ngelahleko yazo,” yongeza ingxelo.
Yintoni efunyanwa nguBoeing kwisivumelwano kukukhutshelwa ngaphandle okucacileyo kwalo naliphi na ibango lomonakalo wokohlwaywa kunye nokuphela kweenkqubo ezisemthethweni zokufunyanwa okanye ukufakwa okuya kufuna ubungqina obongezelelweyo besenzo esingalunganga seBoeing.
"Ijaji alizukuva ubungqina kwimiba yobutyala," utshilo lo mgaqo. "Amaqela ayavuma ukuba akukho bungqina okanye mpikiswano malunga nomonakalo wokohlwaya ngokufanelekileyo iya kufunyanwa okanye yamkelwe."
URalph Nader, umthetheleli wabathengi ixesha elide owaziwa ngokusebenzisa umthetho wobugwenxa ukuze abambe iinkampani ukuba aziphendulele, wayibiza ngokuba "lulungiso olungaqhelekanga ngaphandle kokuba iBoeing iqinisekise naziphi na iidola."
Ukwamkelwa kwetyala kukaBoeing yeyona nto isondeleyo ekuvunyweni ngokupheleleyo kwetyala leengozi ezimbini ezibulalayo zeMAX ezibulele abantu abangama-346: Inqwelomoya yeNgonyama iJT 610 eIndonesia ngo-2018, ilandelwe ngaphezulu kweenyanga ezine kamva yingozi e-Ethiopia.
Nangona kunjalo, iyasilela ekuxeleleni ihlabathi ngokuthe ngqo ukuba yintoni engalunganga kuyilo kunye nesiqinisekiso se-MAX, ukuba yenzeka njani kwaye ngubani owayenoxanduva.
Yintoni eyabangela ukuba zombini iingozi ze-MAX kukusebenza okungalunganga kwesoftware entsha yokulawula inqwelomoya kwijethi - iManeuvering Characteristics Augmentation System, okanye iMCAS - eyanyanzela zombini iinqwelomoya ukuba zingene kwi-nosedive.
Nangona kunjalo inkampani ayizange yamkele esidlangalaleni ukuba uyilo lwe-MCAS luneziphene ezinzulu njengoko luqinisekisiwe, ngaphandle kokutsho ukuba uyilo kunye novavanyo bekufanele ukuba luthathele ingqalelo ngakumbi izakhono zovavanyo oluqhelekileyo kunye nexesha lokuphendula lolingo-uyilo olwalatha ityala elithile kubaqhubi.
UBoeing uthi kwifayile yakhe "akabangi siphoso kuMbhexeshi (uKapteni), umqhubi wenqwelomoya (iGosa lokuQala) okanye afune igalelo okanye ukungakhathali okuthelekisayo nabo."
Isivumelwano sixela ukuba amagqwetha eentsapho aya kuvunyelwa ukuba asebenzise ukufunyaniswa okusemthethweni ukufikelela kwizinto ezifana nedatha evela kubashicileli benqwelo-moya. Oko kuya kubavumela ukuba benze oopopayi ababonisa oko abakhweli bajamelana nako ebudeni bemizuzu emithandathu yohambo lwenqwelo-moya ukuze ubonise uloyiko nokubandezeleka kwabo bafayo.
Iindleko zokugqibela zemali kwiBoeing azinakugqitywa iinyanga ezininzi. Nangona kunjalo, imida ebekwa yisivumelwano kumabango isusa ukungaqiniseki kwinkampani.
Ngokuqhubeka nokutyhilwa kwesenzo esigwenxa kwiinkqubo zenkundla ngoku zikude, iinkokeli zeBoeing zinokukushiyela kumagqwetha ukuba enze izixa-mali zembuyekezo ezichanekileyo ngelixa beqhubeka.